Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Safiiro Badan oo Hore Ku Badashay Kuwo Qawmiyada Tigreega Ah.
Itoobiya oo Safiiro Badan oo Hore Ku Badashay Kuwo Qawmiyada Tigreega Ah.
Gumaysiga Itoobiya oo xidhiidhka uu lalahaa dalka UK sidii hore ahayn ayaa waxa uu soo magacaabay Safiir cusub oo kasoo jeeda qowmiyada Tigreega dalka UK. Safiirkii hore ee dalka UK u joogay Gumaysiga ayaa ahaa nin kasoo jeeda Qowmiyada Axmaarada.
Kadib markii dhaq dhaqaaqyo badan oo kacdoon ah ka billowday Itoobiya waxaa taliska Woyaanaha uu bilaabay innuu isbadal ku sameeyo Safiiradii u fadhiyay dalalka Dibada iyagoo badalaya goobaha ay fashilka badan kala kulmeen. Dalka UK ayaa ah Goobaha aadka ay ugu fashilantay xukuumada Itoobiya iyadoo Banaanbaxyo joogta ah lagu hor qabto Safaarada horteeda, islamarkaasna cabashooyin badan iyo dacwado badan laga dhigay taliska daciifka ah ee Woyaanaha.
Safiirkan Cusub waxaa lagu magacaaba Dr. Hailemichael Abera, Waxa uuna kasoo jeeda qowmiyada Tigreega isaga oo ku dhashay kuna barbaaray magaalada Maqale ee Gobolka Tigrai. Waxa uu ahaa dadkii aadka ugu dhowaa kaligii taliyihii dhintay Males Zenawi, isagoo shaqooyin kasoo qabtay Jaamacada Addis Ababa oo sanadkii 1996 uu maamulka jaamacada kamid ahaa.
1997- 2015. Waxaa loo badalay Jaamacad cusub oo Xukuumada TPLF ka dhisatay Magaalada Addis Ababa oo lagu magacaabo Ethiopian Civil Service University 1997 halkaas oo uu illaa sanadkii hore 2015 ka ahaa Maamulaha Jaamacadaas. Jaamacada Civil Service waa jaamacad lagu barto arrimaha Siyaasadeed ee Xukuumada Woyaanaha gaar ahaan qorshayaasha taliska TPLF/EPRDF halkaas oo ay kasoo baxaan dad kaadir u ah ama loogu talo galay inay qaataan fikradaha kooxda TPLF. Waxaana si gooni ah loogu bartaa Arrimaha Diplomacy-ga ah.
Su’aasha Iswaydiinta Mudan Ayaa ah Maxaa wakhtigan xaadirka keenay in Abera loosoo magacaabo Safaarada UK?
Waa Mida 1-aad dad ayaa odhanaya waxaa laga soo masaafuriyay Dalka Itoobiya, waxaana laga illaalinayaa innuu Siyaasada dalka faraha lagalo, midaas oo dad badan oo qowmiyada Tigreega kasoo jeeda ay akaynayaan innuu ninkan qeyb ka noqdo xoogaga isku haya talada dalka Itoobiya qofkii qaban lahaa.
Waa mida 2-aad dad ayaa odhanaya Qowmiyada Tigreega ayaa cabsi badan ka qabta siyaasadeeda Arrimaha Dibada, waxaana soo xumaaday xidhiidhadii dalku lalahaa ree Europe sidaas awgeed waxaa lamagacaabay dad badan oo Safiirkan kujiro iyo kuwa kaloo la magacaabay oo uu kamid yahay Negash Kiberet oo loo magacabay Special envoy Geneva.
Waxaana la sheegaya maadama waayadan dambe Siyaasadii ONLF iyo mucaaradka Itoobiya ay dharbaaxooyin badan dhagaha uga dhufteen Taliska Woyanaha, waxay qaateen talaabo dib ay isugu habeynayaan Tigreegu iyagoo goobaha muhiimka ah u magacaabay rag “Asara Andhi” micnaha tigree aan la badhxin ah, si galdaloolada isaga buuxiyaan.
Mida Sadaxaad waxaa laga yaaba in ay isleeyihiin wadanku haddii u bur buro in ay sii samaystaan meelihii ay u qaxi lahaaayeen ey caruurtooda gaysan lahaayeen ,iyaga oo raacay qorshihii u Mengistu sameeyay 91kii inta uusan Zimbabwe u qaxin in u adeerkii u sii magacaabay safiirka wadankaas kadibna u caruurtiisii& xaaskiisi u gaystay kadibna u ka daba tagay, xaalada Mengistu way ka duwantahay tan Tigrega sababo badan oo jira. Haseyeeshee waxaa is waydiin leh maanta suurto gal ma tahay in ay xasuuqa shacabka ay gaystaan in ay wadamada reer galbeedka si nabad galyo ah isga joogi karaan.
Dadka qaar ayaa sidoo kale intaas ku daraya siyaasada Itoobiya aad ula socda. Ninkan cusub ee London Fadhigisu yahay in sigaar ah loogu soo diray Dalka UK. Halkaas oo Mucaarad aad u xoog badan kajiro. Mucaaradka Oromada iyo Axmaarada oo aad u abaabulan ayaa ka dilaacay UK, kuwaas oo kadab qaata Jaaliyada Ogaden. Itobiya Qunsulo badan iyo Ergooyin kaalmeeya Safiirki hore ee Axmaarka ahaa ayaa horey loo keenay kuwaas oo dhamanatood fashilmay.
Wasiirka Arrimaha Dibada Dalka UK ayaa bishii May booqasho ku tagay Itoobiya, Wasiirk Arrimaha Dibada ayaa la rajeynaya in canaan badan u gudbiyo Taliska ethiopia oo Dowladiisu eedeymo badan ku tuurtay bishii January.
Waa talaabadii ugu dambaysay ee Woyanuhu isku dayaan ayaa arrintan lagu tilmaamay, Waxaana magacaabist ninkan kusoo aaday xilli Xubno kamida Dowlada UK iyo Ururka Xuquuqul Insaanka ee Amnesty International ay ku qabanayaan shirar lagu canbaaraynayo Ethiopia.
Warku waxa kale oo u intaas ku darayaa in safiiro badan oo kale labaday oy ka mid yihiin safiirka Germay Kumada Demaksa, Safiirka Maryknaka Girma Birru & Safiirkii u fadhiyay wadanka Australia oo lagu badaly haweenayda Abay Woldu. Waxa kaloo horay safiir uga ahayeen wadamo badan oo Shiinuhu kamid yahay.